> Resource > Mac > Sidee inuu ka soo kabsado formatted SD Card Mac
Sidee ayaan u soo kaban karto SD Card formatted on Mac?
Waxaan haystaa kaarka SD Sandisk ah, oo aan si taxaddar la'aan saaka formatted. Dhamaan sawirada iyo videos dadkaygii waxaa loo. Waxaan dareemayaa inaan hadda ka qoomameyn. Runtii waxaan photos aan u baahan tahay dib. Ma jirtaa xal kasta oo wanaagsan si aan u soo kaban karto kaarka SD formatted on Mac? Waxaan la isticmaalayo iMac ah iyo anigu kama aan isticmaalo kaarka SD aan tan iyo markaas. Mahad badan!
Saraaxa hadlayay, formatting shil ah waa mid ka mid ah sababaha ugu weyn oo keeni card SD xogta soo gaartay. In kastoo ay tahay wax aad looga xumaado, waxaad weli soo kaban karto kaarka SD formatted Mac fudayd. Sida xogta ayaa la geliyey card SD aad tan iyo markii formatted, waxaad isku dayi kartaa adiga oo isticmaalaya codsiga soo kabashada card SD Mac formatted si aad u hesho dib oo dhan files formatted.
Wondershare Data Recovery for Mac waa mid ka mid ah barnaamijyada Mac card SD unformat ugu wanaagsan oo awood aad ka bogsato tiro aad u badan oo ah noocyada files ka card SD formatted on Mac, oo ay ku jiraan image, video, file maqal ah, file document, iwm arrinta No aad isticmaalayso iMac, Macbook, Macbook Air ama Macbook pro, qalab xallin kartaa dhibaato.
Download version maxkamadda ka hoos ku qoran, ka dibna waxa aad bilaabi kartaa dib u soo kabashada card SD formatted Mac in qaar ka mid ah qasabno fudud.
3 Talaabada inuu ka soo kabsado formatted SD Card Xogta Mac
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada inuu ka soo kabsado card SD formatted Mac
Ku rakib Wondershare Data Recovery for Mac aad Mac iyo waxa maamula. Barnaamijku wuxuu ku siin doonaa hababka soo kabashada qaar ka mid ah, sida aad ka arki kartaa image hoose. Akhri tilmaamaha uu furmo suuqa si taxadar leh ka dibna aad kala dooran kartaa hababka ugu fiican ee aad u soo kabashada.
Halkan, si ay u qabtaan Mac kabashada card SD formatted, oo aad qaadi karto "lumay Recovery File" sida isku day ah.
Fiiro gaar ah: Fadlan hubi in kaarka SD aad si fiican ugu xiran kartaa Mac.
Tallaabada 2 Scan card SD formatted for files lumay
Waxaas oo dhan qoruhu oo dhan lagu soo bandhigi doonaa in uu furmo. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan warqad drive ee kaarka SD iyo guji "Scan" si ay u bilaabaan raadinaya xogta laga badiyay.
Fiiro gaar ah: Tan iyo xogta lumay, maxaa yeelay formatting kaarka, waxaad u baahan tahay in ay doortaan "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo.
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan formatted xogta card SD ee Mac
Marka gool scan ah, dhammaan xogta laga helay kaarka formatted lagu soo bandhigi doonaa fayl uu furmo. Waxaad ku eegaan karaa magacyada asalka file in lagu hubiyo sida badan lumay faylasha lagu soo kabsaday karo.
Markaas kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan faylasha aad rabto in aad soo kabsadaan oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya aad Mac.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha badbaadiyo files recoverable dib ugu card SD aad ka dib markii dib u soo kabashada. Waxaad dooran kartaa gal ah ku saabsan Mac si ay u sii.